Real oo laga sagootiyey Champion League-ga & Barce oo Wembley iska xaadirisay(Sawiro) – SBC
Real oo laga sagootiyey Champion League-ga & Barce oo Wembley iska xaadirisay(Sawiro)
Barcelona ayaa caawa albaabka Champion League-ga ka saartey kooxda sida weyn ay u xifaaltamaan ee Real Madrid ka dib markii ciyaar ka dhacdey garoonka Nou Cam ay ku soo dhamaatey 1-1 balse aggregate ku noqonaysa 3-1 maadama lugtii hore ee simi Final-ka ay Barcelona ku soo badisay 2-0.
Ciyaarta caawa waxaa ka maqnaa oo aan gabi ahaanba garoonka imaan macalinka Real Madrid Jose Mourinho oo isagu ciyaartii todobaadkii hore ka dhacdey guriga Real Madrid ee Santiago Bernabeu ka dhacdey uu qaatey kaarka cas (red card) isagoo ciyaarta caawa uu ka daawan karay tarbuunka sida daawadayaasha oo kale balse wuxuu ka gaabsadey in uu yimaado garoonka Nou Cam isagoo sida shacab oo kale ah waxaana uu ka door biday in uu ka daawado hoygiisa.
Ciyaartan oo aad u adkeyd Real Madrid uma muuqan inay difaac galayso sida dhacdey kulamadii hore oo caawa waxay bilowdey weeraro u badnaa counter attack taasi oo keentey inay la qaybsadaan ciyaarta Barcelona oo iyadu aan u muuqan inay 2-da difaacansyso balse raadinaysay goolal maadama Real u muuqatey inay weerar tahay. Barcelona waxay nasiib heshay markii ciyaaryahanka Gonzalo Higuain laga diiday gool uu dhaliyey iyadoo ay sii kulalaatey ciyaarta.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaatey 0-0 inkastoo Barcelona ay haysatey 2-dii gool ee todobaadkii hore, markii la isugu laabtey qaybtii labaad ee ciyaarta waxaa sideedii ku soo socdey weerarada labada dhinac. Daqiiqadii 54 ayaa laacibka Pedro wuxuu dhaliyey gool caaqibo leh oo uu u soo dhigay Andres Iniesta sidaasi waxay ciyaartu ku noqotey 3-0 oo ay Barca ku hogaaminayo labada lugood ee ciyaarta.
Laakiin daqiiqadii 64 ciyaaryahanka daafaca ugu ciyaara Real Madrid Marcelo ayaa gudaha goosha Barcelona wuxuu ka helay kubad ka soo laabatey birta oo uu laadey Angel di Maria waxaana uu ku celiyey shabaqa taasi oo u noqon wayday suurtagal goolhayhaha Barca Victor Valdes in uu badbaadiyo. Ciyaarta ayaa noqotey 1-1 wayna sii kulalaatey oo labada kooxood ma anaanay yarsaysan inay goolal keenaan, waxaase ay ku soo dhamaatey 1-1 sidaasina Barcelona ay ku yeelatey 3-1 maadama horey laba gool ay ugu soo dhalisay lugtii hore ee simi final-ka. Barcelona waxay u soo baxdey Final-ka oo lagu qaban doono magaalada London garoonka caanka ah ee Wembley 28-ka bishan May, waxaana ay sugaysaa Manchester United ama Schalke 04 kii soo badiya ciyaarta habeen dambe ka dhici doonta garoonka Manchester United ee Old Trafford oo lugta labaad ay ku kulmi doonaan labada kooxood oo kulankoodii hore ku soo kala baxay 2-0 oo ay ku soo badisay Man United. Barcelona waxay doonaysaa inay qaadato koobkeedii 4-aad iyadoo horey u soo qaaday Champion League-ga sanadihii 1992, 2006 iyo 2009.
waw aad ayaan ugu faraxsnahay barsha iney finalka chhampion timaado mana jirto koobka sidaan aaminsanahy cid nagu hayso aniga oo ku hadlaya afka teegerasha barsha
barca waa khiyaano miiran albiitarayaasha ayaa uhiiliya,,,,,,,,,,,,,,real na fadeexad ayay uga soobaxeen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,wembleyna pritain ayuu ku yaallaa man una way soo baxaysaa waayo waxay wadataa laba goal oo ay kusoo dhalisay away………………..haday timaado finalkana koobka ayadaa leh run ahaantii ani ma aan taageero .,,,,,,,,,,,,,lkn kooxdas wa mid ka mid ah naadiyaasha caalamka ugu wanaagsan